एलन मस्क कसरी बने विश्वकै दोश्रो धनी व्यक्ति ? - खवर संजाल
एलन मस्क कसरी बने विश्वकै दोश्रो धनी व्यक्ति ?
टेस्ला कम्पनीको भाउमा बढोत्तरी भएसँगै यसका सीईओ एलन मस्कको सम्पत्तिमा समेत उल्लेख्य बढोत्तरी भयो । त्योसँगै उनी विश्वका सर्वाधिक धनी व्यक्तिको दोश्रो स्थानमा उक्लिन सफल भए।
माइक्रोसफ्ट कम्पनीका मालिक बिल गेट्सलाई पछि पार्दै मस्क विश्वका दोश्रो सर्वाधिक धनी व्यक्ति बनेका हुन् ।
विद्युतीय कार बनाउने टेस्ला कम्पनीका लगानीकर्ताहरुले आखिर यो वर्ष कम्पनीमा के देखिरहेका छन् ? जुन यसअघि भेउ पाउन सकेका थिएनन् ? जसका कारण यसको शेयर मूल्य लगातार उकालो चढिरहेको छ ।